Guusha Filmka Iyo Xafladii Xalay Loo Dhigay: Ranver Iyo Deepika Oo Goobta Camireen (+Sawiro) – Filimside.net
Guusha Filmka Iyo Xafladii Xalay Loo Dhigay: Ranver Iyo Deepika Oo Goobta Camireen (+Sawiro)
January 8, 2019 Ali Aadan
Inaba caadi ma ahen sida xalay ay udabaal dageen kooxda filmka Simmba ee mashruucoda guusha wacan gaaray waxay dhigteen xaflad heer sare ah oo ay ugu dabaal dagayaan Simmba.
Ranver Singh farxad uma dhina waxuu xalay kulan la qaatay xidigo waaweyn oo uu waligiis ku riyoon jira inuu ak joogo ileen Action Hereos ayaa la iskudhahaa kooxdan waliba meel ay joogaan Akshay Kumar, Ajay Devgan iyo Rohit Shetty.
Xaflad heer sare ah ayee xalay dhigteen kooxda Simmba maadama filmkooda 12 maalmod gudaheed $28 Million kusoo xareeyay waxaana lagu casuumay xafladan Ajay Devgan iyo Akshay Kumar oo muuqaalo marti kulahaa mashrucan.
Waxaa kaloo kasoo qeyb galen xafladan Kajol Devgan, Sara Ali Khan, Director Rohit Shetty, Karan Johar-agaasimaha ugu weyn Simmba iyo kuwa kale damaashaad heer sare ah ayaa goobta kadhacay sido kale Deepika Padukone oo Ranver xaaskisa ah goobta wey joogtay.
Sawirka ugu xiisaha badan maanta baraha bulshada ayaa noqdeen midkaan ay ku kulmeen halyeeyda Action-ka looga haray Akki, Ajay, Ranver iyo Karan inaba caadi ma ahan sida uu baraha bulshada u gil gilaayo.
Sido kale waxaan soo helnay sawiro kale marka sawirkaas laga soo tago kuwaaso ka turjumayaan xidigii xalay goobta kuwada kulmeen dhamaan sawirada laga soo qabtay waxaana sawiradas kamid ah Deepika oo u duceyneysa Ranver, Karan iyo Rohit waa kuwa ugu shactirada badnaayen goobta halkaan hoose ka daawo…
Waxaa Aqrisay 699